#David Concar waan la dhacsanahay hanaanka Maamul ee ka jira Waqoyi Galbeed - Get Latest News From Horn of Africa
#David Concar waan la dhacsanahay hanaanka Maamul ee ka jira Waqoyi Galbeed
By WARIYAHA CAALAMKA On Jul 2, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Mogadishu (AxadleTM)— Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya Amb. David Concar ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo Maamulka ku dhawaaqay gooni isu taagga ee Somaliland.
David Concar ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland deg deg loo bilaabo
Wareysi uu siiyay BBC-da ayaa sheegay inay la dhacsan yihiin hanaanka maamul ee ka jira Somaliland, hase ahaatee aanay dal ahaan u aqoonsaneyn.
Safiirka ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii wada hadal deg deg ah loola furi lahaa, isla markaana dhankooda ay ka shaqeynayaan sidii labada dhinac isku fahmi lahaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa munaasabadii 26-ka June ka sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu bilaabi doonaan wada hadaladii Somaliland, isagoo caddeeyay in Soomaaliya aanay kala maarmi karin, mar un la isku soo noqon doono.
Wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa sanad ka hor hakad ku yimid, iyadoo guddiyo labada dhinac ka socda ay dhowr jeer oo hore ku kulmeen dalka Turkiga.